FBC - Naannichi rakkoo nam tolchee fi uumamaa furuuf bakka socho’aa jirutti hiriira waamun nu hin fayyaadu-Oromiyaa
Naannichi rakkoo nam tolchee fi uumamaa furuuf bakka socho’aa jirutti hiriira waamun nu hin fayyaadu-Oromiyaa
Finfinnee, Fulbaana 3,2010(FBC)- Naannon Oromiyaa yeroo rakkoo nam tolchee fi rakkoo uumamaa keessa jirutti tumsi ummataa barbaachisaa akka ta’e, hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii mootummaa naannichaa obbo Addisuu Araggaan himan.
Rakkoowwan madatan kanneenis deebisuun, lubbuun akka hin baane godhuuf mootummaan naannoo Oromiyaa ummata Oromoo waliin ta’uun humna qabu guutudhaan dirqama isarraa eegamu ba’achaa jiraachuus himaniiru.
Mootumman naannichaa gama tokkoon waldhabbii naannoo daangaarratti uumame to’achuuf humna isaa guutuu bobbaasee nageenya ummataa tiksaa jira.
Gama biraatin immoo rooba cimaa tibbana roobaa jiruun lagni Awaash guutee gandoota 12 irra garagaluu isaaatin lubbuu baraaruuf humna qabu bobbaasee hojjetaa jira.
Humni naannichi qabu hundi rakkoowwan nam tolchee fi uumamaan numudatan furuuf bakka socho’amaa jirutti giddu galeessa Oromiyaatti hiriira nagaa waamuun yeroo kana nu hin fayyaadus jedhaniiru hooggantichi.
Hiriirri nagaa guutu Oromiyaatti yoo waamamu hiriirichi nagaan akka xumuramu godhuun dirqama mootummaa Oromiyaati.
Kana godhuuf immoo humna nageenyaa daangaa irra jiru as deebisuutu nurraa eegama jechuudha jedhan obbo Addisuun.
Yeroo humna nageenyaa daangaarra jiru giddu galeessatti as deebifnu, balaa ummatarra karaa daangaan ga’uu tilmaamuun barbaachisaadhas jedhan.
Qaamonni ummanni Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa akka laafu barbaadan; hiriira ammaa kana keessatti dhiigni Oromoo akka dhangala'u, lubbuun namaa akka darbuu fi naannoon Oromiyaa itti fufiinsan tasgabbii akka dhabdu godhuuf amoommataa akka jiran beekamuu qaba jedhan hoggantichi.
Hiriirri waamamaa jiru kun humna gamtoome bittinneessee saaxilamummaa kan dabalu waan ta’eef, ummanni akka obsu obbo Addisuun dhaamaniiru.
Ummanni Oromoo hundi garaagarummaa malee gamtaadhan mootummaa naannichaa cinaa akka dhaabbatus hoggantichi waamicha dhiyeessaniiru.
Oduuwwan Biroo « Balaa lolaa Awaashin jiraattonni gara biraatti qubsiifamaniiru	Maatii 3662 balaa lolaa Awaash jalaa baraarun danda'ameera -mootummaa »